Namuhla, ama-tile Ceramic isibe impahla ethandwa kakhulu, okuyinto kabanzi ukusebenza kokuphothula imisebenzi egumbini lokugezela, ekhishini, egumbini lokugezela. Sikhishwe yokuthi nokubeka umsebenzi, izingcweti eziningi ezifuywayo enze bona, kukhona kombuzo: lokho usike Tile Ceramic?
Njengoba yaziwa, amathayili ezicwebezelisiwe - ziyaqothuka kakhulu, hhayi amenable ukuba eguqa futhi ukusonteka ngeziningi zezinto zokwakha. It is ezenziwe ngobumba, kwakhiwa okuyinto, womile, ungqimba ocwebezelayo bese wadubula e kuhhonela. Umkhiqizo kwaphumela has a amandla adingekayo, ezahlukene amahle ukubukeka yobuhle futhi ihlala isikhathi eside. Futhi indlela ukusika tile Ceramic, incike indlela ukulungisa kuphumelela, wenziwa ngezandla zakhe. Kunezindlela eziningana ukwenza lo uhlobo lomsebenzi. Ake sicabangele ngayinye yalezi zinkulumo ngokwehlukile.
Uma inani elincane umsebenzi, futhi namanje abazi ukuthi yini usike tile Ceramic, - ukuthenga umshini wokusika ingilazi. Futhi musa ngisho kudingeka nedayimani. Ngoba lokhu kuyiso roller esihle futhi abavamile.
Okokuqala, kumele ubhalisele kusakhiwo. Lokhu kungenziwa umaka evamile noma ipensela esithambile. Khona-ke udinga ukubeka tile on ifemu, ezingeni surface futhi bayibambe wokusika ingilazi kusukela kude onqenqemeni isihloko ukuze ngokwayo (ukuze ushiye inkatho lubonakale phezu koqweqwe lwawo). Ngakho-ke kubalulekile ukusebenzisa ingcindezi nombala ku wokusika ingilazi njengoba ihamba. Manje sidinga ukuba baphule Tile. Ungenza lokhu ngezindlela ezimbili:
ukubeka ngaphansi Tile umdlalo noma nail encane bese ucindezela onqenqemeni Tile;
ukubeka tile etafuleni ukuze umugqa imbobo eqondana ngosiko etafuleni, bese becindezela ingxenye ophumile we-tile.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi imbobo kungenziwa kanye kuphela.
Uma umsebenzi mikhulu, kungcono uthenge umshini wokusika Tile. Kufanele kuqashelwe ukuthi ithuluzi okuhle akukho ruble esingaphansi 500. Uma ukuthenga kuyadingeka ukuba banake kwesisekelo salo, esiwulwazi kufanele babe nokhahlo. Umhlahlandlela okuhamba kuyo ihamba ingxenye yokusebenza kumele kube obukhulu-ngabafaka. Uma namanje ungaqiniseki, kuka usike tile Ceramic, kuzothatha nawe ucezu esitolo eyodwa kanye on-site hlola izinga isichuse imisebenzi.
Ukuze ukusika amathayili ngale ndlela kufanele usetshenziswe ke mshini ubekwe isichuse substrate, uvalwe agxishiwe emgqeni-kocingo. Khona-ke, ubambe isibambo, uyibambe phezu Tile bebheke thina, futhi uma wenza encane amandla ngokucindezela. Khona-ke ngobumnene ibenze isigwedlo - emiphumeleni ekhoneni, esemgwaqweni ku isibambo, Tile iphula ncamashi emgqeni cut.
Ukuze kuzuzwe elamukelekile, isichuse kungcono kakhulu ukunamathela phansi noma ezinye surface flat (le njongo unakho izimbobo ukuba obandayo). Ngaphezu kwalokho, leli sondo umsiki Ungabeka amaconsi ambalwa amafutha engine.
3. Electric Tile
Futhi kuka tile cut ochwepheshe zangempela? Tile Electric. Kukhona ithuluzi okunjalo akukhona ezishibhile, kodwa uyakwazi ukusika disc yedayimane egwadle okuhlala isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, zama-tile, usike Tile Electric has a bushelelezi, imiphetho kahle babanjwa. Othulini futhi izinhlayiya emihle kungonakalisi emagcekeni, kukhona tank amanzi ekhethekile, lapho imali. Uma usebenzisa umsebenzi Tile Electric kumele kwenziwe zokuzivikela imishini - amagogolo namagilavu.
Futhi, kungenziwa tile Ceramic usike grinder. Isikhathi esining impela isetshenziswa ukwenza ukusikeka abacaphuni. Futhi nakuba Cishe kufana ukusika Tile ingilazi kagesi umsiki, grinder ukusika olunembile kancane, kodwa imiphetho jagged ahlale phezu cut. Ukusebenzisa grinder Kufanele kukhunjulwe ukuthi - yomculo ingozi lenyuka. Ngakho lapho kumele izinyathelo ezikhethekile ukuphepha uyalandelwa.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi kanjani futhi yini okungenzeka unqanyulwe tile Ceramic, kukhethwa ithuluzi ngokuba ukuqaliswa umhlobiso elingaphakathi ngokuphelele kuze kuwe - ku amathuba akho kanye kwenkululeko umsebenzi esikhathini esizayo.
Subfloor: izinhlobo, izici eziningi zedivayisi
Sernovodsk, Samara Oblast. Sernovodsk, Samara. Sernovodsk, noma aphendukele
Ihhotela Karona Resort & Spa Indawo 4 *: incazelo kanye nokubuyekeza
Imishado lezivakashi: Inqubekela noma utopia